Saarland University - Higher Education ná Mba Ọzọ na Europe, Germany
Saarland University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1948
Echefukwala atụle Saarland University
Idebanye aha na Saarland University
Saarland University bụ oge a na mahadum n'ime Saar-Lor-Lux region - a di omimi nke Europe kọwara mmadụ na-akọrọ ala n'etiti Germany, France na Luxembourg. Mba n'ọnọdụ kemgbe a akọwapụta akụkụ nke Saarland University kemgbe e guzobere na imekọ ihe ọnụ na France na 1948. taa, 18.500 eto eto na-na-amụ na Saarbrücken na Homburg (ngalaba nke na nkà mmụta ọgwụ), 17 pasent n'ime ha mba ụmụ akwụkwọ. Emi odude ke a obi ụtọ ọhịa ọnọdụ, mahadum campus awade ụmụ akwụkwọ na-eme nnyocha sara mbara egwuregwu na omenala omume, nke ọnụ na ọtụtụ cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eme ka campus ihe ezigbo ebe iji zuo ike n'etiti okwu ma ọ bụ mgbe ọrụ. Na ekele na elu-ọsọ ICE ụgbọ okporo ejikọta ọ na-ewe naanị awa abụọ ndito Saarbrücken ka Paris.
Kemgbe e hiwere, Saarland University lere ya na ọnọdụ na German-French ókè dị ka otu onye nke njimara. ụmụ akwụkwọ nwere ike, dị ka ọmụmaatụ, nweta Europaicum - A akwụkwọ, pụrụ iche na Germany, nke na-egosi mmasị pụrụ iche na nka na omume ndị Europe. Ụmụ akwụkwọ niile na-achị nwekwara ike iji akụkụ nke ha n'ókè omume amụ na otu n'ime anyị zuru ụwa ibe mahadum iji nweta a abụọ-ogo. The n'isiokwu dịgasị iche iche na ọmụmụ awa na-enyere ụmụ akwụkwọ na-eme atụmatụ ha mahadum ọmụmụ ihe n'ụzọ dị irè izute ha kpọmkwem agụmakwụkwọ na ọrụ chọrọ.
Informatics, nanotechnology, biosciences na Europe bụ isi ọzụzụ na-n'ịkpụzi mahadum na profaịlụ. The pụtara ìhè aha nke na Department of Informatics E mesiri obodo na nke mba agụmakwụkwọ kacha mma igba na ọtụtụ externally kwụrụ ụgwọ nyocha oru ngo gafee niile ubi nke agụmakwụkwọ ọmụmụ mesie àgwà nke agụmakwụkwọ ọrụ a na-ebupụ na Saarland University.
Ụmụ akwụkwọ na-obi nke ihe nile ụdị nkuzi mahadum eme. Na Saarland University, dika na anyị mba na onye òtù ọlụlụ mahadum, oké mkpa bụ mmasị na onye nlekọta nke ụmụ akwụkwọ ndị òtù mahadum agụmakwụkwọ mkpara. Nke ahụ bụ a ịrịba ihe dị iche n'ihe ụmụ akwụkwọ a na-enwe na a uka-akụziri mahadum. Ma anyị na-agba ọsọ a nlekota omume nke nwere ụmụ akwụkwọ na-enye nkwado na nduzi mbụ afọ ụmụ akwụkwọ na-enyere mfe ntughari ka mahadum.
A campus mahadum ebe ihe nile dị nso na-eme ka ọ dịrị ya mfe ụmụ akwụkwọ na-na kọntaktị na onye ọ bụla ọzọ na na agụmakwụkwọ mkpara. -Amụrụ enyi na a ụtọ anabata gburugburu ebe obibi na-enye ndị magburu onwe ọrụ na ụmụ akwụkwọ na-ọzọ mma akụkụ nke amụ na Saarland University.
Iwu na Economics
Medicine – Usoro iwu Medicine na Biosciences
Humanities m (History na Civilization Studies)
Humanities II (Asụsụ, Literature na Cultural Studies)
Humanities III (Social na Applied Human Sciences)
Natural Sciences na Technology m (Mathematics na Computer Science)
Natural Sciences na Technology II (Physics na Mechatronics Engineering)
Natural Sciences na Technology III
Saarland University, nke mbụ na-guzosie ike mgbe Agha Ụwa nke Abụọ, e hiwere na November 1948 na nkwado nke French Government na n'okpuru nkwado nke University of Nancy.
N'oge Saarland hụrụ onwe ya na ndị pụrụ iche ọnọdụ nke ịbụ obere kwurula na jikọrọ France site akụ na ụba na ego otu. Na ya Nchikota nke German na French izi omenala na sọrọ asụsụ nke ntụziaka, na mahadum nwere a European n'ọnọdụ site na mmalite. Tupu ntọala nke mahadum, adakarị ọzụzụ ọmụmụ maka ọgwụ ụmụ akwụkwọ na obodo ụlọ ọgwụ dị na Homburg, Saarland, e ẹkenam ke January 1946 na “University Center nke Higher Studies nke Hombourg” guzosie ike na 8 Ka 1947 n'okpuru patronage nke theUniversity nke Nancy. Ụmụ akwụkwọ na ụfọdụ ọzụzụ pụrụ inweta ogo asambodo si ma mahadum.
The onyeisi oche mbụ nke onwe ha mahadum 1948 bụ Jean Barriol. N'otu afọ na mahadum ẹkenam mbụ ọmụmụ na iwu, nkà ihe ọmụma na asụsụ.
Na 1950s Saarland University sonyeere Association of West-German Universities na nabatara a ọhụrụ, ọzọ centralized nzukọ Ọdịdị. The Europa-Institut guzosie ike dị ka a European ndọrọ ndọrọ ọchịchị na iwu na-eche tank.
na 1990 ngalaba nke technology guzosie ike. The mahadum nwayọọ nwayọọ rite eduga research okwa ọmụma technology.
Ị chọrọ atụle Saarland University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Saarland University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Saarland University.
University of Lübec Lübec